Semalt Expert Anotsanangura Nhamba Dzakasiyana Nhatu dzeSeO Tools For 2017
Unogona kushandisa zvigadzirwa zvakasiyana-siyana kuti uwedzere kubudirira kwehu yako yekutengesa digital urongwa. Zvishandiso izvi zvinogona kukubatsira kuti uongorore hutano hwehupenyu hwako, shandisa urongwa hwekutengesa uye uchengetedze hukama pakati pezvimwe zvinhu.
Frank Abagnale, Mutungamiri Wekubudirira Kwemutengi we Semalt , anotarisa pano pamhando dzeZOO zvishandiso zvaunoda kuti uite kubudirira kwemakambani ekudhinda muna 2017 - web development.
Marudzi eSeO zana
Pane mitanhatu mikuru yezviwanikwa zve SEO unogona kushandisa, vazhinji vanoita mabasa akawanda. Vamwe vakasununguka. Iwe unofanirwa kubhadhara vamwe, uye vamwe vanogona kugoverwa sematorium SEO mathuluzi. Vose vanoita basa mukuvandudza kutengesa kwako, ndevamwe:
1. Technical TEO tools
Izvi zvinokubatsira kuti uongorore mugumo wekupedzisira wewebsite yako, ona kuti unoshanda sei uye unoona chero dambudziko raunoda kugadzirisa. Zvishandiso zvishandiso zvinouya munzvimbo dzakasiyana-siyana, uye hapana kana imwe chete yakashongedza zvigadzirwa zvekushandisa kuti ikubatsire kuita nzvimbo yako yepamusoro se SEO friendly.
Zvigadzirwa zve SEO zvishandiso zvinogona kuita zvekugadzira SEO kuongororwa, technical link analysis, web page test, header response codes uye XML sitemap checks.
Sezvaunoita urongwa hwako hwekutengesa, unofanirwa kuziva kuti iwe uripi pane mamwe maitiro. Apa ndipo pane matanho ekugadzirisa anouya. Anokuratidza kuti nzvimbo yako yakadini ikozvino yakaenzana nematricrics akawanda akadai se keywords uye backlinks..
Nezivo izvi, unogona kuita zvigadziriswe uye unogadzirisa pose paunoona kubudirira kana kukundikana kwekutengesa kwako.
Kana iwe uchikwanisa kunyatsotarisa mazwi ezvinyorwa, zvinoreva kuti vatengi vanoita mibvunzo yakabatana nebhizimisi renyu vanowanzoendeswa kumapeji enyu ewebhu.
Chinyorwa chinokosha chinokupa ruzivo rwekuti nguva yakareba sei izwi rinotsvaga muzvinjini zvakasiyana-siyana. Iwe unogona kududzira zvinyorwa uye usarudze kuti ndeapi mazwi makuru achakubatsira bhizimisi rako kuita zviri nani mumagariro ekutsvaga kwehupenyu.
4. Kubudirira Kwezvakagadzirwa Zvishandiso
Nhauriro inokosha mune SEO yako. Zvigadzirwa zvekugadzirisa zvishandiso zvinongedza hutano hwehuwandu hwehu huno maererano nezvinhu zvakadai sekukodzera, kuverenga, nekugadziriswa kwezvinjini.
Zvishandiso izvi zvinokubatsira kuti uwane maonero ekugadzirisa uye ugadzire urongwa hwehupenyu hunosimbisa rukudzo rwewebsite yako pakati pezvaunotarisira apo uchizoita zviri nani SEO kushanda kumativi ose
Kunyange zvazvo iwe usingafaniri kuisa disavow links, kana Google's Penguin Algorithm ichikupa mhosva, iwe uchada kubvisa dzimwe hukama. Izvi zvinogona kutora nguva yako yakawanda.
Unogonawo kubvisa mazano kana akanganisirwa neOOO zvakaipa, kana zviri mukati mako zvakabatanidzwa kune dzimwe nzvimbo dzingakanganisa hutungamiri hwako. Iwe uchakohwa nekugara pamabhuku akanaka eGoogle.
Kunyange zvazvo Google inopesana nesangano rekugadzirisa, inogona kukubatsira iwe. Izvi ndezvokuti hukama huri pakati pezvinhu zvakakosha zvezvinhu zvinobatsira Google kusarudza kana nzvimbo yako yakavimbika kana ane simba pamusoro pemamwe mazwi makuru kana nyaya.
Kana iwe uchiita zvakarurama, chengetedza chivakwa chinofanira kuva chinokosha zvikuru kune vose vari vaviri, mumwe anokohwa mubairo wehutano hwakanaka apo imwe inomutsa kuziva nezvezita yavo sechiremera mune imwe munda.